Samachar Batika || News from Nepal » गो’प्य ‘पा’र्ट गोरो बनाउनेको बजारमा भिड !
गो’प्य ‘पा’र्ट गोरो बनाउनेको बजारमा भिड !
एजेन्सी । थाइल्याण्डबासीमा यतिबेला एउटा वि’चित्रको शौख पलाएको छ । यसमा यति मानिस आकर्षित भएका छन्, जसका कारण प्रश्न उठेको छ कि के ब्युटी उद्योगले सबै ह’द पार गर्न लागेको हो । रु पुरुषको यो आ’कर्षण ‘गो’प्य पा’र्ट लाई गोरो बनाउने कोशिसमा बढेको हो ।
एसियाली मुलुकमा छालालाई गोरो बनाउने कोशिस नयाँ भने होइन, किनभने काला रङ्गको विषयमा यहाँ वि’चित्रको सोच छ । हालै जब यो विषयसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई अनलाइनमा हा’लियो तब यो भा’इरल हुन केहीबेर पनि लागेन । थाइल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो प्रक्रियाको विषयमा चे’तावनी पनि जारी गरेको छ। बीबीसी थाई सेवाले यो प्रक्रियाबाट गुज्रेका एक जनासँग गरेको कुराकानीमा उनले भने–म आफ्नो ”’स्वी”मि”ङ ब्री’फ्स’मा बढी सहज महशुस गर्न चाहन्थेँ । ३० वर्षका उक्त व्यक्ति दुई महिनाअघि पहिलोपटक यस्तो सत्रबाट गु”ज्रेका थिए र उनले ‘शे’ड”मा परिवर्तन देखेका थिए ।
यो उपचार उपलव्ध गराउने क्लिनिकको तर्फबाट जुन फेसबुक पोस्ट गरिएको छ, त्यसलाई मानिसहरुले दुई दिनमा १९ हजारपटक शेयर गरे । यो उपचारमा छालामा मे’ला’नि’न कम गरिन्छ । यो पोस्टमा उपचार कक्षको तस्वीर र पहिलो र पछिको इ’ल’स्ट्रेश’न पनि छ । यो विषयमा मानिसहरु फरक फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । केही भनिरहेका छन् कि यो आवश्यक छ । यहि केहीले रोजक सुझाव पनि दिइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार ‘यसलाई ट’र्च’का रुपमा प्रयोग सकिन्छ, चम्कन देऊ ।
एक जना महिलाले आ’श्चर्य प्रकट गर्दै लेखेकी छन् कि उनी यसको रङ्गलाई लिएर त्यति धेरै ग’म्भीर कहिले पनि भइनन् बरु सा’इज र ‘मू’भको विषयमा चि’न्ता व्यक्त गरिन् । यो सेवा दिने ले’ल’क्स अस्पतालका मार्केटिङ म्यानेजर पोपोल तन्साकुलले बीबीसीसँग भने कि उनले चार महिना पहिला महिलाहरुको ”गो’प्य ‘पा”र्ट गो’रो बनाउने सेवा सुरु गरेका हुन् । उनले भने–मानिसहरु त्यति बेलै बाट यसका बारेमा सोध्न थालेका थिए ।त्यसैले हामीले एक महिनापछि यो सेवा पनि थाल्यौ ।’ पाँच सत्रको यो पूरा प्रक्रियाको खर्च ६५० डलर छ ।
रङ्ग परिवर्तन गर्नेहरुको औषतः २०–३० जना हरेक महिनामा उपलव्ध भइरहेका छन् ।
यद्यपि यो हेर्न अझै बाँकी छ कि के थाइल्याण्डका पुरुष आफ्नो ”गो”प्य ‘पा’र्टको रंग परिवर्तनका विषयमा कति रुची देखाउँछन् । यो क्लिनिकलाई रङ्ग परिवर्तन गर्नेहरुको औषतः २०–३० जना हरेक महिनामा उपलव्ध भइरहेका छन् । केही त म्यान्मा, कम्बोडिया र हङकङबाट पनि आइरहेका छन् । पोपोलले भने–यो गे पुरुषहरुका बिच निकै लोकप्रिय छ, जो आफ्नो निजी ‘अ’ङ्गको विशेष ख्याल राख्दछन् । उनीहरु सबै क्षेत्रमा राम्रो देखिन चाहन्छन् ।
थाइल्याण्डको पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीले यो क्लिनिकको चर्चा बटुल्ने बाहना भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ। मन्त्रालयले यो प्रक्रियाबाट ‘गु’ज्रदा ‘पी’डा, निशान, ज’लन, स’न्ता’न उत्पादन गर्ने र यहाँसम्म कि स”म्ब’न्ध का’यम ग’र्न स’मस्या आउन सक्ने चे’तावनी दिएको छ। यसका साथै उपचार रोकेपछि छालाको रङ्ग पुनः पहिलाजस्तै हुन सक्ने र त्यसमा फो’होर ध”ब्बा पनि पर्न सक्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका डाक्टर थान्गजाई कीर्तिहट्याकोर्नले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्–”’ले”ज”’र जरुरी छैन, पैसा खर्च मात्र हो, यसबाट सकारात्मकभन्दा न’कारात्मक कुरा बढी हुन सक्दछ ।
मन्त्रालयले यो प्रक्रियाबाट ‘गु’ज्रदा ‘पी’डा, निशान, ज’लन, स’न्ता’न उत्पादन गर्ने र यहाँसम्म कि स”म्ब’न्ध का’यम ग’र्न स’मस्या आउन सक्ने चे’तावनी दिएको छ।
विगत दश वर्षमा दक्षिण एसियामा ‘स्कि”न व्हा’इट’नि’ङ्गको चलन बढ्दो थियो । ‘ले’ल’क्सका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विरामी यस्तै उपचारका लागि उनको क्लिनिकमा आउने गरेका छन् । यो चलनका आधार त्यो पम्परागत दृष्टिकोण हो, जसमा मानिस गोरो रङ्गलाई महत्व दिने गर्दछन् । बजारमा छालालाई गोरो बनाउने उत्पादन पनि भ’रमा’र छ र अतितमा यसको प्रचार गर्नेहरु विज्ञापनको कयौपटक वि’रोध पनि भइसकेको छ।
उदाहरणका रुपमा एउटा ‘स्की’न ‘व्हा’इट”निङ क्रीमको विज्ञापनमा देखाइएको छ कि बैंककको पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सिटको माथि लेखिएको छ–यहाँ मात्र गोरा नागरिक बस्न पाउँछन् ।’ एउटा थाई कस्मेटिक कम्पनीले यस्तै विज्ञापन फिर्ता लिनु परेको थियो । किनभने सामाजिक सञ्जालमा यो विज्ञापनप्रति च’र्को ‘आ’पत्ति प्रकट भएको थियो ।
छाला गोरो बनाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
धेरै व्यक्तिलाई गोरो बन्ने रहर हुनसक्छ। गोरो बन्न पुरुषहरुभन्दा महिलाहरु बढी प्रयासरत हुन्छन्। बजारमा गोरो बनाउने अनेक क्रिम तथा पाउडरहरु पाइन्छन्। धेरै पैसा खर्चेर ती क्रिमको प्रयोग गरेपनि गोरोपना पाउन सक्दैनन्।
तर, गोरो बन्न क्रिम नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीसँग भएकै घरेलु सामानको प्रयोगबाट छालामा निखार ल्याउन सक्छौं। प्राचीनकालमा पनि महिलाहरूले गोरो छालाका लागि घरेलु सामाग्री कै प्रयोग गर्थे।
यसो पनी पढ्नुहोस:
गोरो बन्न यस्ता घरेलु सामान प्रयोग गर्न सकिन्छः
१. महः महमा हुने भिटामिनले छाला गोरो बनाउन मद्दत गर्छ। अनुहारमा मह लगाएर २ मिनेट जति मसाज गर्ने र करिब १५ मिनेटपछि मनतातो पानीले पखाल्ने।
२. टमाटर वा घ्यूकुमारीः टमाटर वा घ्यूकुमारीको रसलाई अनुहारमा दलेर केही मिनेट म’साज गर्ने र २० मिनेटपछि पखाल्ने ।
३. दूध वा दहीः दूध वा दहीमा भएको तत्वले गोरो बनाउन मद्दत गर्छ। अनुहारमा दूध वा दहीले म’साज गर्ने र केही समयपछि मनतातो पानीले धुने।
४. कागतीः कागतीमा गोरो बनाउने तत्व हुन्छ। कागतीको रसलाई अनुहारमा लगाएर २० मिनेटसम्म राख्ने र पखाल्ने। कागतीको रस लगाउँदा सु’ख्खा छाला भएकालाई विचार गर्नुपर्छ। यसले छाला झन् सु’ख्खा बनाउन सक्छ।
छाला गोरो बनाउन यी बाहेक काँक्रा, बेसार, सुन्तलाको बोक्राको धुलो, मेवा, अण्डाको सेतो भाग प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, यी सामान प्रयोग गर्दा आफ्नो छालाको प्रकार र आफूलाई फाप्न-नफाप्ने बुझेर गर्नुपर्छ। यसका साथै यी चिजहरु लगाएर घाममा बस्न हुँदैन।
प्रकाशित मिति २८ फाल्गुन २०७६, बुधबार १४:४३